Shiinaha oo ka hadlay heshiiska TPP - BBC News Somali
Shiinaha oo ka hadlay heshiiska TPP
Image caption Heshiiska TPP.
Iskaashigan Maraykanku horseedka ka yahay ee waddammada ku yaala badweynta Pacifi-ga waxaa uu soo socday muddo sannado ah, waxaana uu weli u baahan yahay inay ansixiyeen baarlamaannada dowladaha xubnaha ka ah.
Laakiin heshiiskan shalay la saxiixay waxay dadka qaar ku tilmaameen inuu yahay heshiis ganacsi ee taariikhda la saxiixo kii ugu weynaa isagoo meesha ka saaraya 18 kun oo canshuurood ee badeecadaha Maraykanka oo keliya.
Sida heshiisyada ganacsiga oo dhan lagu arko, heshiiskani dabcan waxaa uu leeyahay dad wax ka sheegaya laakiin ma jiraan wax Shiinaha ka shaki badan oo iyaga oo la sheegayo inay ka baqayaan in loogu tala galay in dhaqaale ahaan la xakameeyo ama meel lagu oodo, waxayna ku socotay wax aad loo aaminsan yahay inay tahay heshiisyo ganacsi xor ah oo iyada ay iska leedahay oo heshiiskan la tartamaya.
Hase yeeshee, hadal ay soo saartay wasaaradda ganacsigu waxay heshiiska waddammada Pacifiga ugu yeertay mid ka mid ah heshiisyada ganacsiga xorta ah ee muhiimka ah ee gobolka Asia-Pacific, waxayna sheegtay in Shiinuhu ay u furan yihiin heshiis kasta oo waafaqsan xeerarka Ururka Ganacsiga Adduunka.
Dadka wax dersa qaarkood waxay qabaan in Shiinuhu mar dhow ama mar dambe tii ay noqotaba, ay khasab ku noqon doonto inay ku soo biirto heshiiskan cusub, taas oo ra'iisalwasaaraha japan uu toddobaadkan sheegay inuu soo dhoweyn doono.
Heshiiskan waxaa uu yareynayaa canshuuraha badeecado fara badan iyo lacagaha ganacsiga ka dhexeeya Maraykanka, Japan, Canada, Mexico, Australia, New Zealand, Chile, Peru, Malaysia, Vietnam, Singapore iyo Brunei.